Araho ny dian-tongotr'i Arthur Guinness, angamba ilay anarana malaza indrindra any Irlandy, ary miala sasatra miaraka amin'ny pint amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny manamorona ny arabe lehibe manamarika ny toerana nahaterahany. Ny sary vongany mitovy habe amin'ny fiainana dia manamarika ity toerana mampiavaka azy nandaniany ny ankamaroan'ny fahazazany ity. Manomboka eto dia azonao atao ny manaraka an'i Arthur's Way mankany Ardclough izay misy foibe fandikana sy fampirantiana, ary avy eo mandroso mankany Oughterard Graveyard - ny toeram-pialanany farany. Mandehandeha amin'ny tantara amin'ny Celbridge Heritage Trail - avy amin'ny Christian Tea Lane voalohany, toerana fialan-tsasatry ny Grattans; mankany amin'ny Speaker Connolly's Castletown House - trano fonenana tsara indrindra any Irlandy; avy eo mandroso mankany amin'ny Village Celbridge manan-tantara izay mandray ny làlana amoron-drano milamina na ny lalana mitaingina hazo mitsivalana mankany amin'ny tokontany Celbridge Abbey misy rohy mankany Jonathan Swift. Ho an'ireo mpitsangatsangana bebe kokoa, maninona raha mankafy lakana mitaingina ny Ony Liffey, mamaky sambo amin'ny Cliff of Lyons na mivezivezy manaraka ny Grand Canal mankany Sallins.
Top fahitana any Celbridge
Hijery misimisy kokoa ao Celbridge